MBA ဘွဲ့ရ Aspire FOR COLLEGE ဝန်ခံချက် Guidelines သိထားရမည်
သူတို့သားသမီးလည်းမိမိတို့၏ဘေးဥပဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်း entry ကိုစာမေးပွဲကိုင်တွယ်ရိုးရိုးခဲ့ကြပြီးတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန်အဆင်သင့်ရလာသောအခါအပြည့်အဝအချိန်ကျိန်းသေအားလုံးမိဘများအားဖြင့်ကြောက်ပေမဲ့. သို့သော်မိဘများလုံးဝတက္ကသိုလ်ဝင်ပေါက်အပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ရှိခြင်းစဉ်းစား?! သငျသညျဝင်ပေါက်အရာရှိများနေသောမိဘများကိုတွေ့လိမ့်မည်; this type of person likewise parents to teens being delivered down to university. They realize that some children see this method of university admissions as demanding and annoying, however they can alter their viewpoint to create it more satisfyingaperiod full of chance and pleasure.
5 ကောလိပ်အတွက်ကောင်းမွန်သောအဆင့်ရယူခြင်းများအတွက် Insider သိကောင်းစရာများ
« ဆောငျးပါးရေးသားခြင်းအကြံပြုချက်များ -6အလွန်ကြီးစွာသောအက်ဆေးရေး STEPS အတွက်
(4 သိကောင်းစရာများ) လစာစီစာကုံးရေးရန်လုပ်နည်း? »